အမေရိကန်CPI ဒေတာကို ထရိတ်ဒါများ သတိထားစောင့်ကြည့်သင့်
ငွေဖောင်းပွမှုသည် အမေရိကန်ဒေါ်လာငွေလဲနှုန်းအတွက် အလွန်အရေးပါတဲ့အချက်အလက်တစ်ခုဖြစ်ပြီး စားသုံးသူများ၏ ပေးချေမှုဒေတာမြင့်လာပါက ငွေဖောင်းပွမှုများလာတယ်လို့ မှတ်ယူနိုင်တာကြောင့် အမေရိကန်ဗဟိုဘဏ်က စီးပွားရေးတည်ငြိမ်အောင် အတိုးနှုန်းတင်ဖို့ ကို ဆုံးဖြတ်မှာ ဖြစ်ပါသည်. ထိုကြောင့် ယခုဒေတာအားကောင်းလာပါက ဒေါ်လာတန်ဖိုးပါ အားကောင်းနိုင်ပြီး ဒေတာအားပျော့ခဲ့ပါက ဒေါ်လာအားပျော့သွားနိုင်ပါသည်.
နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ခဲ့သည့်ဒေတာကြောင့် USDအပေါ် ဆိုးကျိုးသက်ရောက်ခဲ့ပါသည်. မေလက ၀. ၁%ကျဆင်းခဲ့ပြီး ဇွန်လတွင် ပြန်မတက်လာခဲ့ဘဲ ယခင်နှုန်းထားအတိုင်းသာ ရှိခဲ့သည့်အပြင် သဘာဝဓာတ်ငွေ့နှင့် မိုးဘိုင်းဖုန်းဝန်ဆောင်မှုများပါ နောက်ထပ်ကျဆင်းလာခဲ့ပါသည်. ထို့ကြောင့်ပင် အမေရိကန်ဗဟိုဘဏ်၏ ယခုနှစ်အတွင်း တတိယအကြိမ် အတိုးနှုန်းတင်နိုင်ခြေကိုပါ ဈေးကွက်က သံသယရှိလာနေပြီ ဖြစ်ပါသည်. ဈေးကွက်က USDကိုအသည်းအသန်ဝယ်တာကို မြင်လိုပါက အမေရိကန်CPIဒေတာ အားကောင်းလာတာဖို့ကို အရင်ဆုတာင်းရမှာ ဖြစ်ပါသည်.